Maitiro ekugadzirisa zvirongwa muArch Linux pasina Internet kubatana | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuvandudza zvirongwa muArch Linux isina internet yekubatanidza
Gnu / Linux uye kugoverwa kwayo kune akasiyana siyana, ane simba uye akachengeteka masisitimu anoshanda. Kune akawanda mamiriro ari anobatsira kupfuura Windows kana macOS, asi zvinoda zvinhu izvo munzvimbo zhinji dzepasi zvisingasvikike se, semuenzaniso, Internet kubatana.
Makondinendi senge African kana American ichine zvikamu nenzvimbo uko kubatana kweInternet kwakaoma kana kusingaiti. Ndechikonzero cheichi chikonzero isu tiri kuzokuudza iwe nezve iyi dzidziso, nekuti isu hatisi nguva dzose kuwana mukana weInternet asi isu tinofanirwa kugadzirisa mamwe makomputa zvirongwa. Ino nguva yatichataura nezvayo kuzviita sei paArch Linux, kutenderera kwekuparadzira kugovera iyo inogara iri yepamusoro-uye isingamiriri kuburitswa kweshanduro dzakati.
Kugadziridza zvirongwa muArch Linux tisina Internet chinongedzo isu tinoda hukuru hukuru usb, kana tichida kumutsidzira anopfuura chirongwa chimwe, komputa ine internet yekubatanidza uye iyo Packup script. Iyi script inogadziridza zvirongwa nekuteedzera iyo Internet kubatana. Unogona kuiwana mu yako GitHub repository.
En komputa ine Internet kubatana isu tichafanirwa kuita zvinotevera:
Mushure memaminetsi mashoma, isu tinokatanura usb kuti tishandise pakombuta iyo isina Internet yekubatanidza.
Zvino mukati komputa isina internet yekubatanidza isu tinofanirwa kuita zvinotevera:
Uye nokuda chenesa ndangariro ye USB yatinofanira kuita inotevera:
Nezvo tichava nehurongwa hwakanaka hwe kugadzirisa zvirongwa muArch Linux pasina kuda kuve neinternet. Yakanaka kune masosi uko iyo yeinternet yekubatanidza iri murombo kana isipo. Zvakare nemakamuri emakomputa uko zvisina kukosha kuti makomputa ese ave neInternet kuwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuvandudza zvirongwa muArch Linux isina internet yekubatanidza
Uff, inonakidza ... maita basa neruzivo ... Kune zvinhu zvakaita seizvi, ndinoda GNU / Linux zvakanyanya uye nekuwedzera.
Maitiro ekugadzira bootable USB
Connect Watch ichavhura smartwatch neLinux seye inoshanda system